आफूमाथि अभद्र व्यवहार भएको भन्दै पूर्वमन्त्री रानाद्वारा छानविनको माग - Hamar Pahura
आइतबार, साउन १०, २०७८ २०:००:४७
काठमाडौं, साउन १० गते । कैलाली क्षेत्र नं. ५ का प्रतिनिधि सदस्य तथा पूर्व वन तथा वातावरणमन्त्री नारदमुनी रानाले आफूमाथि संसदीय समिति बैठकमा अभद्र व्यवहार भएकोभन्दै छानविनको माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबार बसेको बैठकमा समिति सदस्य माधवकुमार नेपालसहित केही सांसदले अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै उहाँले छानविनको माग गर्नुभएको हो । उहाँले संघीय संसद सचिवालयमा निवेदन दर्ता गरी श्रव्यदृश्यको रेकर्डिङ उपलब्ध गराईदिन पनि माग गर्नुभएको छ ।
समितिको बैठकमा एमाले वरिष्ठ नेतासमेत रहनुभएका नेपालले सर्वोच्चको फैसलाले देशको संविधानको रक्षा भएको, लोकतन्त्र जोगिएको, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि संसदीय समिति समेत जोगिएकोभन्दै अभियानमा सहयोगी सबै सांसदहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो । प्रतिगमनको हार भएकोभन्दै उहाँले सांसदहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएपछि आफ्नो बोल्ने पालो आएपछि सासद नारदमुनी रानाले धारणा राख्नुभयो ।
धारणा राख्नेक्रममा उहाँले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना त सर्वोच्च अदालतको पैmसलाले गरेको हो, नयाँ सरकार गठन पनि सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको हो, त्यसैले यो जनादेशबाट भएको होइन, परमादेशबाट भएको हो भन्दै धारणा राख्नुभयो । त्यति धारणा राखेपछि समितिका सदस्यहरु उहाँमाथि खनिनुभयो । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले पूर्वमन्त्री रानालाई ’प्रतिगमनको मतियार‘ भन्दै आलोचना गर्नुभयो ।
समिति सदस्य नेपालले बैठक कक्षमै थर्काउँदै पूर्वमन्त्री रानालाई ‘प्रतिगमनको मतियार बन्ने ? समिति सदस्यबाट तुरुन्त राजीनामा दिएर बाहिर जानुस्’ सम्म आफूलाई भनेको सांसद रानाले गुनासो गर्नुभयो । समितिका सदस्य तथा नेता नेपाल पक्षका सांसद दिपकप्रकाश भट्ट (कञ्चनपुर) ले पनि पूर्वमन्त्री रानालाई ‘समिति बैठकबाट बाहिर जानुस्’ भन्नुभयो । ‘तपाई प्रतिगमनका मतियारलाई समिति बैठकमा बस्ने कुनै अधिकार छैन’ भन्दै आफूलाई थर्काएको पूर्वमन्त्री रानाले बताउनुभयो ।
उहाँहरुको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै पूर्वमन्त्री रानाले भन्नुभयो, “मलाई समिति बैठकका लागि किन बोलाइयो ? किन आमन्त्रित गरियो ? बैठकमा बोलाएपछि बोल्न अवरोध किन गरियो ?” समिति बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपाल र आफ्नो हैसियत बरावर भएको तर उहाँले आफूलाई राजिनामा दिएर बाहिर जानुस् भन्ने अधिकार नभएको सांसद रानाले तर्क गर्नुभयो । समिति बैठकमा सांसदहरुबीच आरोप प्रत्यारोप भएपछि समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेललाई रोक्न हम्मे भएको थियो ।
समितिमा भएको सांसदहरुबीचको विवादको श्रव्यदृश्य बाहिरिएपछि अहिले सामाजिक सञ्जाल तथा न्यूमिडियामा व्यापक टिकाटिप्पणी शुरुभएको छ । वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका कार्यकर्ताले चर्कौ आलोचना गरिरहनुभएको छ ।